Ra’iisal Wasaare Kheyre oo Dhagax Dhigey Jidka Soddonka ee Magaalada Muqdisho+Sawirro | IshaBay Dhaba
Ra’iisal Wasaare Kheyre oo Dhagax Dhigey Jidka Soddonka ee Magaalada Muqdisho+Sawirro
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa maanta dhagax dhigey dhismaha Jidka Soddonka oo is ku xirta dagmooyinka dhowr ah oo ka tirsan gobolka Banaadir,waxaana dhaqaalaha ku baxaya iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Taabit Cabdi Maxamed oo furitaanka Wadada ka hadlay ayaa tilmaamey in shacabka Muqdisho looga baahan yahay inay la shaqeeyaan dawladda, ayna ka qeyb qaataan horumarka ka socda caasimadda si looga gudbo dhibaatooyinka ka dhex jira Muqdisho iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxuuna cadeyey in Dawladda Hoose ay qeyb muhiima ka qaadaneyso dhismaha waddooyinka iyo sugidda amniga caasimadda.
“Waxaan shacabka Soomaaliyeed kula dardaarmayaa inay ka shaqeeyaan dib-usoo-celinta billicda dalka iyo dib-u-dhisida caasimada, iyagoo la kaashanaya hoggaankooda”ayuu yiri Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa bilihii lasoo dhaafey sameenayey waddooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ku dhex shaqeeya Caasimadda.